Iraan waliigaltee hojii nukileeraa daangessuu diidge - BBC News Afaan Oromoo
Iraan waliigaltee hojii nukileeraa daangessuu diidge
6 Amajjii 2020
Iraan kana booda waligaltee bara 2015 irratti hojii nukileeraa daangessuuf kan waligaltee turte akka diigdee beeksifte.
Ibsa ba'e irratti kana booda hojii nukileeraashee irratti, dandeetti, sadarkaa, meeshalee, qorannoos ta'e foyya'iinsaa isaa akka homaaa hin dangeessine agarsiisa.
Murteen kun kan beeksifame walga'ii kaabinee Iraan, Teehraanitti taasifameen booda.
Ajjeechaa Janaraal Qaseem Solemaani magaalaa Baagdaad booda Iraaniifi Ameerikaa gidduu waldhabdeen jiru hammaateera.
Akka gabaasaaleen Baagdaadirraa dhaga'aman tokko tokko jedhanitti haleellaan Dilbata galgalaa moora imbaasii Ameerikaa magaalaa Baagdaadirratti kan xiyyeefate ture.
Akka maaddi BBCtti himetti dhukaasii afur kallatti imbaassichaatii dhukaafameera. Miidhaan ga'uufi dhiisuurratti gabaasi ba'e hin jiru.
Ameerikaan lammiilee ishee atattamaan Iraaqii akka bahan akeekkachiifte
Dambaliin ummata Iraan reeffa Qaaseem Solemaanii simachuuf bahe
Dilbata kana Dambaliin ummata Iraan reeffa Qaaseem Solemaanii simachuuf bahe, sirni awwaalchaa ammoo Kibxata gaggeefama.
Ajjeecha Solemaanii booda manni maree Iraaq waaraanni biyyooti biraa hundi biyyashee akka gadhiisaniif waamicha dhiyeessiteetti.
Akka gamtaa idil addunyaatti gartuu IS kuffisuuf looltonni Ameerikaa 5000 ta'an Iraaq keessatti argamu. Filannoo Dilbataa Iraaq dura gamtaan kun sochii IS'n mormuun taasisu yeroof dhaabeera.
Pireesdaant Donaaldi Tiraamp yoo Iraan du'a Solemaaniif haaloon ba'a jettee ejjennoo fudhatte Ameerikaan deebiste akka rukuttufi sanuu 'haalaa irra guddateen ta'a' jechuun irra deddeebiin dorsiisaniiru.
Dubbii Iraan- US irratti hawaasni addunyaa maal jedha?
Miseensoti waligaltee nukileeraa 2015 keessa jiran - UK Firaans, Jarmanii, Chaayinaa fi Raashiyaan erga bara 2018tti Ameerikaan waligaltee kana keessa of baaftee booda waligaltee kana tursuuf yaalaa turani.
Chaansilarri Jarmanii Anjela Markel, Pireesdaantii Firaans Immaanu'eel Makrooniifi MM Biriteen Booris Joonsan Dilbata galgala Iraan ejjennoo waligalticha mormuu akka hin fudhanne gaafachuun ibsa waliini baasaniiru.
"Waldhabdee hir'isuufi naannichatti tasgabbiin akka jiraatu taasisuuf qaamaa ilaallattu hundaa waliin maarii itti fufuuf nuti qophoofneerra," jedhu.
Dilbata kana MM Biriteen, Joonsan du'a Solemaaniin 'hunda keenyaaf rakkoo kan uumu ture" jechuun du'a isaarratti " gadda guddaa hin qabu" jedheera.
Hogganaan haaja alaa Gamtaa Awurooppa Josep Borell, dhimmaa waligaltee nukileeraafi waldhabee ajjeechaa Solemaani booda akkamiin hir'isna kan jedhu irratti akka waliin mari'ataniif Ministira haaja alaa Iraan, Mohaammad Javaad Zarif Biraassils akka daawwataniif affeerraa dhiyeessaniiru.
Ajjeefamuu Qaaseem Solemaanii: Dambaliin ummata Iraan reeffa simachuuf bahe
5 Amajjii 2020
Janaraalli beekamaa Iraan Qaasim Solemaani ajaja Tiraampiin Iraaq keessatti ajjeefaman